SamSam (2019) | MM Movie Store
ဒီတဈခါကားလေးကတော့တကယျကိုsweetဖွဈတဲ့ဇာတျအိမျလေးနဲ့ပါ။ ဇာတျလမျးလေးက စကွဝဠာထဲကဂွိုဟျအသီးသီးမှာနထေိုငျကွတဲ့လူမြိုးလေးတှအေကွောငျးဇာတျအိမျတညျထားတာပါ။ ကားနာမညျကဇာတျလိုကျကောငျလေးရဲ့နာမညျပါကားလေးကအစပိုငျးမှာအမွငျဆနျးပါမယျ။
၃မိနဈလောကျကွာရငျတော့ဆမျဆမျဆိုတဲ့အနီရောငျဂွိုဟျပျေါကကောငျလေးနဲ့မကျဂါဆိုတဲ့အစိမျးရောငျဂွိုဟျသူမလေးတို့ရဲ့ဘဝကှာခွားပုံကိုသိသိသာသာမွငျရမှာပါ။ ဆမျဆမျရဲ့မိဘတှကေ သားသမီးကိုနားလညျမှုနဲ့ထိနျးကြောငျးပါတယျ မကျဂါလေးကတော့ခြုပျခယျြခံရပါတယျ ဘာလို့ဆိုမကျဂါ့အဖကေရကျစကျတဲ့ အာဏာရှငျကွီးမလို့ပါ။
မကျဂါ့အဖကွေီးဟာ ကလေးတှရေဲ့ အပြျောအပါးကိစ်စတှကေိုမုနျးပါတယျ။ စကွဝဠာထဲမှာလူကွီးရောကလေးပါအစှမျးတှရှေိကွပါတယျ။ သူမြားကလေးတှထေကျအစှမျးရနောကျကနြတေဲ့ ဆမျဆမျလေးဟာအိမျကိုလိမျပွောပွီးကြောငျးလာတကျတဲ့မကျဂါလေးနဲ့ခငျသှားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့မကျဂါကလူတိုငျးမုနျးတဲ့ဘုရငျကွီးရဲ့သမီးဆိုတာသိသှားကွတဲ့အခါမှာတော့ ဇာတျလမျးလေးဟာ အခြိုးအကှလေ့ေးတှနေဲ့ကွညျ့ကောငျးပါတယျ။ အခုပွောပွခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ဇာတျလမျးရဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့ အပိုငျးတှကေိုထညျ့မပွောထားသေးဘူးမို့ Spoil လုံးဝမဖွဈစသေလို . ဇာတျလမျးလေးဟာ အတျောကိုကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ။
တူ တူမ သားသားမီးမီးလေးတှကေတော့ အကွိုကျပေါ့နျော။
ဒီတစ်ခါကားလေးကတော့တကယ်ကိုsweetဖြစ်တဲ့ဇာတ်အိမ်လေးနဲ့ပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးက စကြဝဠာထဲကဂြိုဟ်အသီးသီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးလေးတွေအကြောင်းဇာတ်အိမ်တည်ထားတာပါ။ ကားနာမည်ကဇာတ်လိုက်ကောင်လေးရဲ့နာမည်ပါကားလေးကအစပိုင်းမှာအမြင်ဆန်းပါမယ်။
၃မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ဆမ်ဆမ်ဆိုတဲ့အနီရောင်ဂြိုဟ်ပေါ်ကကောင်လေးနဲ့မက်ဂါဆိုတဲ့အစိမ်းရောင်ဂြိုဟ်သူမလေးတို့ရဲ့ဘဝကွာခြားပုံကိုသိသိသာသာမြင်ရမှာပါ။ ဆမ်ဆမ်ရဲ့မိဘတွေက သားသမီးကိုနားလည်မှုနဲ့ထိန်းကျောင်းပါတယ် မက်ဂါလေးကတော့ချုပ်ချယ်ခံရပါတယ် ဘာလို့ဆိုမက်ဂါ့အဖေကရက်စက်တဲ့ အာဏာရှင်ကြီးမလို့ပါ။
မက်ဂါ့အဖေကြီးဟာ ကလေးတွေရဲ့ အပျော်အပါးကိစ္စတွေကိုမုန်းပါတယ်။ စကြဝဠာထဲမှာလူကြီးရောကလေးပါအစွမ်းတွေရှိကြပါတယ်။ သူများကလေးတွေထက်အစွမ်းရနောက်ကျနေတဲ့ ဆမ်ဆမ်လေးဟာအိမ်ကိုလိမ်ပြောပြီးကျောင်းလာတက်တဲ့မက်ဂါလေးနဲ့ခင်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်မက်ဂါကလူတိုင်းမုန်းတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးဆိုတာသိသွားကြတဲ့အခါမှာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးဟာ အချိုးအကွေ့လေးတွေနဲ့ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ အခုပြောပြခဲ့တဲ့ အထဲမှာ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေကိုထည့်မပြောထားသေးဘူးမို့ Spoil လုံးဝမဖြစ်စေသလို . ဇာတ်လမ်းလေးဟာ အတော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
တူ တူမ သားသားမီးမီးလေးတွေကတော့ အကြိုက်ပေါ့နော်။
Once UponaTime in China I (1991)
Young Aunt – Link 3
Drishyam ( 2013 )